Shacabka Muqdisho Oo Saakay Jawi Cusub ku Soo Toosay iyo Ciidanka Doowladda oo Waddooyinka Xiray | Xaqiiqonews
Shacabka Muqdisho Oo Saakay Jawi Cusub ku Soo Toosay iyo Ciidanka Doowladda oo Waddooyinka Xiray
Shacabka magaaladda Muqdisho ayaa saaka ku waabariistay jawi ka badalan kii ay xalay ku seexdeen kadib markii ciidamo aad ubadan ay xireen wadooyinka magaaladda.
Ciidamadan oo aad uhubeysan ayaa xiray xiray Wadooyinka ugu muhiimsan ee Magaalada Muqdisho, tani ayaa la xiriirta Munaasabada aas aaska maalinta ciidanka xoogga dalka 12ka -April oo lagu wado maanta si weyn looga xusi doono Muqdisho.
Warbaahin Dowlada ayaa Xalay waxey baahiyeen fariimo shacabka loogu sheegayo in la xirayo Wadooyinka Muqdisho islamarkaana shacabka ay dulqaataan,waxaana lagu wadaa in Munaasabada lagu xusayo aas aaska ciidanaka xoogga Dalka in uu ka qeyb galo Madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha labada gole ee Dowlada Soomaaliya.
Si kastaba gabaldhicii shalay ayaa ciidanka Dowlada Soomaaliya waxey horay u sii xireen Wadada aada Madaxtooyada Soomaaliya,iyadoona inta xiliyada Muqdisho ay ka dhacayaan Munaasabadaha sidan oo kale ah inta badan la xiro Wadooyinka arimo ku aadan Amaanka.
Ciidamo badan ayaa dhanka kale ku sugan isgoysyada magaaladda Muqdisho, kuwaas oo sugaya amaanka.
Xuska maalinta ciidamada xooga dalka ayaa kusoo aadaya xili madaxweyne Farmaajo uu dhawaan iclaamiyay dagaal ka dhan ah AlShabaab sidoo kalana Muqdisho ay ka dhacayaan qaraxyo waa weyn oo qaarkood lagu laayay ciidamada maanta dabaal dagaya.